Muuri News Network » SAWIRRO: Suldaanka Guud Ee Beesha Biimaal iyo Ugaas Axmad oo kullan la qaatay saraakiil American ah
SAWIRRO: Suldaanka Guud Ee Beesha Biimaal iyo Ugaas Axmad oo kullan la qaatay saraakiil American ah
May 11, 2017 - 1 Jawaab
Kullan ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen Ururrada Qaramada Midoowe iyo African union ayaa waxa uu ka dhacay xerada xalane ee ku taala gudaha airportka Aadan cadde ee Magaalada Muqdisho.
Kullanka ayaa waxaa lagu casuumay salaadiinta, waxgaradka, culimada, saraakiisha Iyo Madaxda Beesha Biimaal ee Gobolka shabeelaha hoose.
Madaxda Kullankaasi ka qeybgashay waxaa ka mid ahaa Suldaanka Guud Ee Beesha Biimaal Suldaan Ibraahim Cali Xaaji Cabdalla, Ugaaska Beesha Biimaal Ugaas Axmad Ugaas Siid Cali, Nabadoon Awyare Abshiroow, gudoomiye ku xigeenka gobolka shabeelaha hoose xagga maamulka iyo siyaasadda Mudane Xassan Shiine iyo taliye Ku xigeenka nabad sugidda Koonfur galbeed Taliye Maxamed Adeereey.
Kullanka ayaa waxaa looga hadlay arimo badan oo ay ka mid yihiin dhisida ciidan qaran oo kahowlgala gobolka shabeelaha hoose iyo in la qarameeyo ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jiro kooxaha argagixisada alshabaab, iyadoo ay kulanka ka qeybgaleen saraakiil ciidan oo mareekanka ah kuwaa ka saacideeya dowladda Somaaliya dib udhiska ciidamada qaranka iyo xureynta deegaanadda ay nabad diidka haystaan.
Odayaasha ayaa gudbiyay fariin ah muhiimadda ay leedahay in ciidamada Beesha Biimaal ay hogaamiyaan dagaalada lagu xureynaya deegaanadooda maadaama ay horay arimahaasi u bilaaween.
Ciidamada Deegaanka ayaa helay aqoonsi caalami ah maadaama ay soo bandhigeen awoodooda iyo aqoontooda ciidan, waxaana la filayaa in ay wadashaqeyn iyo taageero rasmi ah ay dhexmaridoono iyaga iyo beesha caalamka dowladda federaalka ay horay u ballanqaaday in ay ladagaami doonto mooryaanta ku qaraabta magaca militariga soomaaliya.
Ugu danbeystii odayaasha kulanka lagu casuumay ayaa kaga mahadceliyay beesha caalamka wada shaqeynta wanaagsan ay laleeyihiin ciidamada deegaanka iyo beesha caalamka waxa ayna ballan qaadeen in lashaqeyndoonaan
One Response to SAWIRRO: Suldaanka Guud Ee Beesha Biimaal iyo Ugaas Axmad oo kullan la qaatay saraakiil American ah
12/05 at 10:14 am
Waa arin wanaagsan in wixii jira lala wadaago waan Soo dhaweyneynaa laakiin dad daacad ah Oo Ale iyo Rasuul yaqaana miyaa la waayay. Tan kale suldaan axmadeey Maxaa dhiiga ka qaaday. Biimaal saldanadi way ka dhuntay. Buraaseey Bal isku soo raaca cida Suldaanka ah. Tan kale ibraahim iyo awyare waa calooshood u shaqeystayaal.tan kale hadii nin walba uu yidhaahdo anigaa suldaan ah. Markaasi waa la inalaga faa ideysan war aynu midowno gacmaha is qabsano.Ibraaahimoow hadii nin Ale ka baqi aad ahaan laheyd nin kaaga wanaagsan ma jiri laheyn suldaanimo laakin dhibka ku heysa laguma aaminino karo